Magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya ayaa waxaa ka socda dedaalo lagu doonayo in lagu furo shir ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya una dhexeeya madaxtooyada Soomaaliya iyo dowladdaha xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya.
Madaxtooyada Soomaaliya iyo xubnaha beesha caalamka ayaa wada dedaalo ay ku doonayaan inay ku mideeyaan ajandayaasha dhinacyadu wataan ee gundhigga u noqon doona bilowga shirka.
Dhinacyada Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa doonaya in shirka gundhig looga dhigo qodobadii ka soo baxay Dhuusamareeb 3, iyagoona diidey in dooda laga bilaabo meel ka hoosaysa.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa doonaya in shirka laga bilaabo qodob aan ka ahayn doorashada iyo in DFS ciidankeeda ka soo saarto gobolka Gedo maamulkana gacantiisa dib loogu soo celiyo.
Puntland ayaa dhankeeda u xusul duubaysa sidii shirku u noqon lahaa mid lagu hirgeliyo aragtiyo cusub meeshana laga saaro hashiisyadii horay ay u galeen madaxda saddex maamul goboleed iyo madaxtooyada Soomaaliya.
Beesha caalamka iyo madaxtooyada Soomaaliya waxa ay dhankooda ayidsan yihiin in shirarka Muqdisho sal looga dhigo qodobadii ka soo baxay Dhuusamareeb 3 lana dhegaysto cabashada maamuladii ka maqnaa.
cidla ku dhaca Puntland
dambeeyey ee shirarka
Previous articleSheikh Idiris oo Cajiib ah uga hadlay Wasiirada Cusub iyo R/wasaare Rooble waxa hor yaala !
Next articleMadaxwayne Farmaajo oo ku dhowaaqay Xiliga shirka Muqdisho Furmayo iyo Maamulada oo lagu Casuumay